Nay Nyo Chan: Lesson-5- Feelings
As time went by, I got increasingly anxious because the doctors weren’t telling me anything. After two hours I was seething with anger (ready to explode with anger), and I shouted at one of the nurses. Then the security guards came and escorted me out of the hospital.
အချိန်တွေကကြာ ဆရာဝန်တွေကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဘာတစ်ခုမှပြောမပြထားတော့ နေမြင့်လေ အရှုးရင့်လေဆိုသလို စိုးရိမ်စိတ်တွေ များလာတယ်။ နှစ်နာရီကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒေါသတွေ အချောင်း ချောင်းထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ သူနာပြုဆရာမလေးတစ်ယောက်ကို အော်ပြစ်တယ်။ အဲဒီမှာပဲ လုံခြုံရေးတွေရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို ဆေးရုံအပြင် ပို့တော့တာပဲဗျာ။
bottle up her emotions
ဇနီးသည် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီး နိုးထလာတဲ့အချိန် ကျွန်တော်က သူ့ဘေးမှာ ရှိမနေတာကြောင့် ဇနီးသည် စိတ်ပျက်နေပုံက အထင်းသားပေါ်လွင်နေတယ်။ ဇနီးသည်က ဘာမှတော့ မပြောရှာပါဘူး။ ခံစားချက်တွေ ရှေ့တန်းတင်တဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ခံစားချက်တွေကို ရင်ထဲမှာ သိမ်းထား ရတာကိုပဲ သူပိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ဇနီးသည်ကို စိတ်အားငယ်စေခဲ့မိပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ဒေါသတွေ မထိန်းချုပ်ပဲ ပေါက်ကွဲသွားခဲ့မိတာကိုပဲ ကျွန်တော် ယူကျုံးမရ ၀မ်းနည်းနေ မိတယ်လေ။
deeply depressed အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျ
emotional wreck စိတ်ဓာတ်ကျသူ စိတ်ပျက်နေသူ
pleasantly surprised အားရကျေနပ်ဖွယ် အံ့အားသင့်
immensely grateful အရမ်းကျေးဇူးတင်
overwhelmed with emotion ခံစားချက်တွေလွှမ်းမိုး
နောက်လတွေမှာလည်း အခက်အခဲတွေနဲ့ပဲလေ။ ဇနီးသည်က စိတ်ဓာတ်တွေအရမ်းနေကျနေတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်ဓာတ်ကျ စိတ်ပျက်နေသူလေ။ မိသားစုနှင့် အလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှ တစ်ယောက် တည်း လက်မလည်တမ်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရတာဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် အခုတော့လည်း အရာရာဟာ တစ်ပတ်ပြန်လှည့်လာပါပြီ။ အိမ်နီးနားချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေဆီက အကူအညီတွေရနေ တာကိုပဲ အားရကျေနပ်ဖွယ် အံ့အားသင့်ရပါတယ်။
ဇနီးသည်နှင့် သားလေး နေကောင်းကျန်းမာနေတာကိုပဲ ကျွန်တော့်မှာ ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း ကျွန်တော့်မိသားစုလေး ကံကောင်းလိုက်တာဆိုပြီး ပြန်တွေးမိတော့ ကျွန်တော့်မှာ ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ခံစားချက်တွေက လွှမ်းမိုးထားတယ်။
1. At his mother's funeral, he was so incapacitated / overwhelmed /seething with emotion that he couldn't finish his speech.
2. I was deeply / pleasantly / significantly surprised by the excellent customer service - that company really cares about its customers.
3. I'm sorry I forgot / lost / wrecked my temper with you yesterday. It wasareally stressful day at work.
4. Instead of confronting his issues, he bottles / guards / rolls up his emotions and tries to pretend everything's OK.
5. It's normal to go throughahelicopter / roller coaster / ocean wave of emotions after the end ofalong-term relationship.
6. My mother was worried bad / ill / sick when it passed midnight and my brother still hadn't come home.
7. The boss was pleasantly / sickly / visibly annoyed when the employees told him about the problems.
8. The fans were seething with anger / disappointment / temper when the team lost the game in the last5minutes.
9. We're badly / horribly / terribly sorry, but we won't be able to go to your graduation.
10. We're blissfully / immensely / largely grateful for all the help you've given us in this project.
Posted by Nay Nyo Chan at 8:44 PM